कुनबार कुन भगवानको पुजा गर्ने ? के गर्दा मिल्छ शुभःफल ! – Nep Stok
पुष २२, २०७८ बिहिबार 106
मान्यताअनुसार ३३ करोड देवी–देवता छन् । यी सबै देवी–देवताको पूजा एकसाथ गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले हरेक बारको आफ्नै महत्व रहिआएको छ । यद्यपि, कुनै–कुनै दिनमा भने विशेष देवी–देवताको पूजाअर्चना गर्दा सांसारिक कामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।सप्ताहको सात दिनले पनि विशेष महत्व राख्दछ । हिन्दु धर्मले कुन दिन कुन देवी–देवताका लागि समर्पित छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । यसरी गरिने पूजाबाट के फल मिल्छ जानी राखौँ ।
Prevभाग्यमा छ भने भगवानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फु’टाएर घरभित्र आउँछ धन
Nextचिसोका कारण क’ठ्या’ङ्ग्रि’एर ३ जनाको मृत्यु
चर्चित र्‍यापर आशिष राणा ‘लाउरे’ पोखराबाट प’क्राउ